Muxuu salka ku hayaa safarka James Swan ee Hargaisa? (Akhriso) – Radio Daljir
Muxuu salka ku hayaa safarka James Swan ee Hargaisa? (Akhriso)
Luulyo 28, 2019 9:17 b 0
Wakiilka Qaramada Midoobay ee Arrimaha Soomaaliya James Swan ayaa maanta waxaa lagu soo dhaweeyay magaalada Hargaisa ee xarunta mamaulka Soomaaliand, halkaas oo uu kulamo kula qaadan doono madaxweyne Biixi.
James Swan ayaa markii uu ka degay Hargeysa waxaa uu booqday Xarun Xirfado kala duwan dadka lagu baro oo ay maalgelinteeda iska kaashadeen hay’adda qaxootiga ee UN-ka iyo Machadka Shaqaalaha rayidka Soomaaliland, kaas oo ay taageerayso Barnaamijka Horumarinta Qaramada Midoobay ee (UNDP).
Kulanka madaxweyne Biixi iyo wakiilka waxa ay diirada ku saari doonaan arrimaha la xiriira doorashooyinka gole yaasha dowladda ee mamaulka Soomaalialnd oo shalay ay heshiis ka gaareen xukuumadda iyo Madaxda Xisbiyda Mucaaradka iyo wadahadallada Soomaliya iyo Soomaaliland oo mudo hakad ku jira.,
Waa booqashadii ugu horeysay ee Wakiilka Qaramada Midoobay ee Arrimaha Soomaaliya James Swan uu ku tago Hargeysa tan iyo markii xilkaasi loo Magacaabay.
Waa sidee xaalada Guddoomiye Yariisow? (dhegayso)
Garoonka diyaaradaha ee Dhuusamareeb oo dib loo furay iyo ciidamadii ku sugnaa oo laga qaaday